Jiritaankii Itoobiya oo Jarta dheer kadhacay wuxuuna Eersaday Oromo. – Xeernews24
Jiritaankii Itoobiya oo Jarta dheer kadhacay wuxuuna Eersaday Oromo.
19. März 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Rabshadihii shalay ku curtay magaalada Addis ababa ee caasimada u ah Itoobiya ee Oramada iyo Amxarada u dhexeeyay ,waxay ahaayeen kuwo lawada sugayay oo aanu shaki kujirin inay dhacayaan, Labada Qoomiyadoodna waxay si rasmiya ugu diyaar Garoobeen dagaal Natiijadiisa aan la mahadin balse ugu Yaraan ay ku kala baxayaan.
Rabshadihii shalay waxaa lagu bur buriyay Hanti badan oo isugu Jirta Guryo Gaadiid iyo dukaamo Yar yar waxaana lagu dhacay dhowr bangi, Rabitaanka Oramada iyo damaca Amxaaradu waalaba aan marnaba lays waafajin karin dhibka uwayna xukunka Itoobiya iyo Lahaanshaha caasimada itoobiya ee adis ababa ayuu kataaganyahay.
Oromada waxaa kago’an oo wacad ay kumartay inay Addis ababa magaalo Oromo noqoto Halka Amxarana wacad kumartay inay adis ababa sida ay Hada tahay sii Ahaanayso, taasi oo kadhigan inay tahay magaalo Amxaaro oo aan marnaba muran Galayn.
Dhoolatus caga juglayn iyo bood bood marka laga tago adis ababa Amxaaro ayaa kugacan saraysa kuna gacan sarayn hadii lays farasaaro, waayo Axmarada waxay diyaar u tahay inay si dhab ah u difaacato Naf iyo Maalba iyo lahaanshaha Addis ababa, Halka Oromo ay iska dhaadhicisay Khiyaali kusalaysan mudaharaad inay kula wareegi karto Addis ababa.
Rabitaanka Khayaaliga iyo beenta kudhisan ee Oromadu isugu sheekaysay inay dowlad Oromo Hogoominayso Itoobiya kahanaqaaday, waxay Ahaani kutahay oo Geeri kaxiga si fududna u Fashilin doona Axmaarada dhabta ah ee Aaminsan inay Oromo kamid tahay Hanti ay iyagu iska leeyihiin oo ay Aabayaashood kadhaxleen, waxaana xaqiiq ah inaysan Oromo u babac dhigi karin Axmarada markay runi run tagto.
Marka Lafiiriyo Hogaaminta Abiye Axmed waxaa uu Noqday Fadhiid aan Hal Talaaba ah Rogi karin dhamaan wax Qabadkiisiina waxaa uu kusoo Aruursaday, Maxaabiistii siyaasadeed ee uu siidaayay iyo siyaasada arimaha dibada oo uu Geeska Afrika Isbadal nabadeed oo aan caga Adag kutaagnayn ka Hirgaliyay.
Qomiyadihii kala Diinta, Sinjiga, Dhaqanka iyo Afka ahaa ee ku Hoos Jiray dalada Itoobiya way sii kala Foganayaan marba marka kadambaysa, colaadaha Qomiga ahina waa Horumarka ugu badan ee Itoobiya kasocda tan iyo intii uu Abiy xilka lawareegay, Arinta aan wax kaqabashada lahayn waa malaayiinta gudaha dalka ku barakacay kuwaasi oo Gaajo u dhamaanaya cid u maqana aysan Jirin.
Si dhab ah marka loo Hadlo ee aan Lasiyaasadayn majirto Hal Qoomiyad ah oo Laheshiis ah Qoomiyad kale, Tusaale ahaan Somaali iyo Oromo waa col, Somaali iyo Canfar sidoo kale Dabka makala Qaataan, Oromo iyo Amxaro waa ilu Aragtay oo Masaajid iyo Kaniisad Toona iskuma bariinayaan, Oromo iyo Beni Shangul Deeradaa dhex miranaysa, Shucuubta Konfureed Warmahay isla wada Gaadayaan, Gambella dhexdoodana waa col dariskoodana waa u col, Tigree iyo Amxarana dhufayskay isugu Jiraan.
Markaad dhan kaste ka Eegto dhaqan iyo siyaasad xumada Oromada waxaa Hubaala inuusan sidan xaal kusii soconayn, waxaana suuragal ah inuu dhaco Agambi milateri oo dhiig badani kudaato waxaana Halkaa Fursad Dahabi ah kahelaya Tigreega oo maanta ah cudud ahaan Qomiyadaha Itobiya tan ugu itaalka roon, balse waxaa is waydiintu tahay Somaalida maxaa u diyaarsan ? mise iyagu waa iska dumaal u Joog oo kolba kii meesha Qabsada ayaa Adeerkood ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/03/Ethnic-Federalism-1.jpg 448 580 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-03-19 17:22:282019-03-19 17:23:23Jiritaankii Itoobiya oo Jarta dheer kadhacay wuxuuna Eersaday Oromo.
Eritrea ma Farmaajo ayey dhabar jebisay mise qorshe kale ayaa jira? Waxaa maanta ka dhacay magaalada Erer ee gobolka Sitti shir dhaqmeed ay ku kulmeen...